Muuri News Network » Siyaasi: Ahmed Ali Gacal oo warbixin cajiib ah ka qoray sirta ka danbeysa..
Siyaasi: Ahmed Ali Gacal oo warbixin cajiib ah ka qoray sirta ka danbeysa..
Waa maxay federal? Maxay soomaaliya u qaadatay? Waa maxay faa,idooyinka federalka ?
Erayga federal waa eray assalkiisu ka yimid afka-giriiga, malahan eray-bixin rasmi ah oo laga heli karo afkeena hooyo; marka laga reebo kaliyah inaan micna guud u sameyno waxa uu yahay federaal?. Taariikh ahaan waxa uu bilowday 1793-kii iyadoo loo isticmaali jiray micna ka duwan kan hadda loo isticmaalo dunidan casriga ee qanigan 21aad.
Wadankii ugu horeeyay ee isticmaala waxa uu ahaa faransiiska. Kacdoonkii fransiiska ee xilligaasi bilowday waaxa uu ahaa dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo lagu doonayay in lagu daciifiyo awoodda dowladda dhexe ee paris iyadoo awoodda dowladnimo loo daadejinayo dhamaan gobollada kale ee dalka faransiinka. Kadib dhamaadkii dagaalkii labaad ee aduunka waxaa qaaradda yurub kabilowday dhaqdhaqaaqyo badan oo lagu doonayay in lagu hirgeliyo nidaaka federaalka. Waxaana loo yaqiinay dhaqdhaqaaqii yurub 1948.
Hadaba, micnaha federal ee waqtixaadirkan dunida isticmaasho waa “ nidaam dowladeed oo awooddaha dowladda ay u qeybsantahay dowlad dhexe iyo tiro gobollo ee xubnaha ka ah nidaamka federaalka”
Federaalismka waxa uu noqday nidaam dowladeed oo aad loogu riyaaqay oo ku baahay dhamaan qaaradaha aduunka oo ay afrika ku jirto. Wadamada ku dhaqma ama qaatay nidaamka federaalka aad beey u tira badanyihiin oo waxay gaarayaan ilaa 25 waddan, waxaana ka ka mid ah wadamaadas; Australia, Barazil, Canada, India, Ethiopia, Nigeria I.W.M.
Soomaliya waxa ay ka mid tahay wadamada qaatay nidaamka federaalka 10-kii sano ee ugu danbeesay laga soo bilaabo 2004-kii, hasayeshee markii ugu horeysay ee loo dhaqangeliyo si sax ah waxa ay ahayd sanadkii 2012-kii.
Waa maxay Sababadaha keenay in ay soomaaliya qaadato nidaamka federaalka?
Iyadoo dadkii ay ka daaleen dowlad dhexe taasoo hal gobol ku uruurisay dhamaan awoodihii dalka.
Adeegii guud ee dadka ka dhaxeeyay oo lagu koobay ha gobol sida; baasaboorkii, cisbitaaladii weeynaa, tacliintii sare sida jaamacadaha, I.W.M.
Isu dhiili tirnaan ka jirtay gobollada dalka soomaaliya.
Gobollada dalka oo ay maamulayeen dadkale oo kor looga keenay.
Baahi badan oo ay dadka u qabeen in la baahiyo awoodda dowladnimo ee dalka laga soo bilaawo heer qaran ilaa heer gobol, degmo iyo tuulo.
Talda dalka oo aan si siman looga wada qeyb gallin iyo go,aan ka gaaridda danaha dalka oo ah wax dadka oo dhan ka dhaxeeya
Burburkii ku yimid heshiiskii 1960-kii ee ka dhaxeeyay soomaalidii ingiriiska gumeysanjiray ee gobollada woqooyi iyo soomaalidii taliyaanigu gumeysan jiray eek u xusnaa heshiis awood qeybsi I.W.M. iyadoo federalku u muuqdu wadada kaliyah ee lagu soo cellin karo midnimadii dalka soomaaliya oo aan ula jeedu in Somaliland fursad u siinkaro federaalka in ay markale la midowdo somaliya.
Qodobadaas aan kor ku soo xusay waxay ahaayeen sababa keenay waxa ay dad badan oo ka mid ah soomaalida ugu doodayaan qaadashada iyo dhaqangellinta nidaamka federaalka
Faa,idooyinka federaalka soomaaliya?
Federaalku waxa uu keenaa faa,idooyin badan waana nidaam doowladeed oo ay dunida badankeedu ku guuleeysatay dhaqangelintiisa, isla markaana la ogaaday faa,idoooyinkiisa, culimada siyaasaddana wax badan ka qoreen. Haddaba , waxaan si kooban u xusi doonaa faa,idooyinkaas:-
In ay si toos ula xiriiraan dhibaatooyinka soo wajaha dowlada hoose dadka deegaanka iyada oo aan la sugin waqti dheerna lagu bixin in dhibaatada la gaarsiiyo dowladda dhexe. Xalka dhibaatada ee dowladaha hoose waxaa ku aqoon badan dadka deggan dowladdaha hoose, waxaa laga yaabaa in dowladda dhexe aan aqoon rasmi ah oo lagu saleeyo xalinta khilaafaadkaas aan lahyn.
Federalismka waxa uu fursad u siiyaa dadka deegaanka in ay dejistaan siyaasadaha ay ku maamulayaan deegaannadooda, maxaa yeelay, majirto cid kaga aqoonbadan dadka deegaanka waxa u darran iyo waxa u wanaagsan.
Federalismka waxa uu keenaa baahinta awoodda dowladnimo. Waxa uu meesha ka saaraa kalitalisnimo ama xisbi gaar ah inuu talada dalka gacanta ku dhigo siduu doonana u maamusho iyadoo taladu tahay wax dadka ka wada dhaxeeyo.
Federalismka waxa uu keena isku filnaan dhaqaale iyo in gobolkastaba uu tartan u galo in uu kheeyraadka ku jira isku filneeysiiyo. In dowladda dhexe laga sugo adeegga guud oo dhan waxa ay caqabad ku tahay horumar isu dheelitaran oo dalkoo idil ka hanaqaada.
Dhibaatooyinka federalka aad beey u yaryihiin marka la barbardhigo faa,idooyinka. Federaalka waxa uu oggolaada in dowladaha hoose dhaleeceeyaan isla markaana buuq ku furaan siyaasadaha qaran ee dowladda dhexe dejisay.
Feaderalismka wuxuu faa,ida darro u abuuraa dowlad goboleedyadda faqriga ah kuwaas oo ku keena in ay gaari waayaan waxbarasho tayo leh, caafimaad, daryeeylka deegaanka IWM.
Ahmed ali mohamud “gacal”